Waxyaabaha laga filan karo safarka Trump ee Aasiya - BBC News Somali
Waxyaabaha laga filan karo safarka Trump ee Aasiya
Image caption Donald Trump Madaxweynaha Maraykanka
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa safarkiisii koowaad ku maraya qaaradda Aasiya, isaga oo lugta marinaya dalalka Japan, Koonfur Kuuriya, Shiinaha, Vietnam iyo Filibiin.
Meel kasta oo uu tago waxaa horyaala caqabado ay tahay in uu wajoho, halkan ayaanan kusoo koobaynaa qaarkood.
Taageerayaasha Trump oo Kampala lagu xiray
Trump waxa uu ka dhul bilaabayaa saaxiibada ugu dhow Maraykanka ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed, balse waa Kuuriyada Waqooyi moowduuca ugu weyn ee ay ka hadli doonaan.
Kuuriyada Waqooyi waxa ay kal horeba samaysay tijaabadii lixaad ee gantaal hubka Nuyuukleerka ah, iyada oo labo gantaal dul marisay dalka Japan. Inkasta oo cunaqabataynta lagu sii adkeeyay, haddane hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uma muuqdo nin dhimaya damaciisa horumarinta hubka wax gumaada.
Korjoogtada qaarkood ayaa isweeydiinaya in booqashadan ay Pyongyang ku qasbi doonto in ay wax badasho, balse haddii wadahadalada uu Trump la leeyahay madaxda dalalka uu booqanayo ay ku saabsanyihiin sidii laga yeeli lahaa Kuuriyada Waqooyi, uma badna in la gaaro wax is faham ah.
Iyada oo shacabka Japaan ay u diyaargaroobayaan sidii ay uga badbaadi lahaayeen haddii lasoo weeraro, ayaa dowladda Japan waxa ay Maraykanka ka doonaysaa damaanad qaad ah in la siiyo taageero militari oo mug leh, sidoo kale waxaa taageero ceynkaas oo kale u baahan xukuumadda Kuuriyada Koonfureed ah halka ugu horeysa ee uu dagaalka qabsan karo.
Waxyaabaha isha lagu hayo ee kale waxaa ka mid ah in Trump uu fariimo ku qori doono bartiisa Twitter-ka marka uu u dhawaado xuduudda Kuuriyada Waqooyi , iyada oo horey loo ogaa hadalo kulul oo dhexmaray Trump iyo Kim Jong-un.
Image caption Dadka shiinaha ayaa horay ugu maadsaday madaxweynihii hore Obama
Shiinaha waa taageeraha ugu weyn ee xagga dhaqaale ee Kuuriyada Waqooyi, Trump-na waxa uu weeydiisan doonaa in ay gacan ka siiyaan cunaqabataynta la saaray dalkaas.
Balse hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping oo mardhow kasoo baxay shirkii xisbiga shuuciga oo awoodo dheeraad ah lagu siiyay ayaa laga yaabaa in uusan yeelin dalabka Trump.
Rajo yar ayaa laga qabaa in ay wax iska badalaan siyaasadda Maraykanka iyo Shiinaha ee hadda jirta, taas oo ku dhisan taxadarka badan.
Trump waxaa lagu yaqaanaa hadalada kulkulul ee uu u jeediyo Shiinaha arrimaha la xiriira ganacsiga iyo dhaqaalaha awgiis, isaga oo xitaa mar ku eedeeyay in ay xadeen shaqooyinkii dadka Maraykanka ah.
Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah shacabka Shiinaha sida ay u arki doonaan booqashada Trump iyo waxa ay ka dhihi doonaan, iyada oo horey loogu yaqiinay in ay ku maadeystaan madaxda Maraykanka ee dalkooda booqata.
Trump meelaha uu tagi doono waxaa ka mid ah dalka Vietnam oo horey dagaal qaraar u dhexmaray Maraykanka, iyo waliba dalka Filibiin , waxaana xiiso leh sida Maraykanka u wajihi doono dalalkan.
Ganacsiga ayay u badantahay in wadahadalada ay hareeyaan, iyada oo ay horay u jirtay in Trump uu ka baxay heshiiskii dhaqaale ee lagu magacaabi jiray TPP, taas oo ay ka xumaadeen dalal ay Vietnam ka mid tahay.
Dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna walwal ka qaba in Trump uu ka bixi doono heshiisyo ganacsi oo horey u jiray.
Balse su'aalaha la'is weeydiinayo ayaa ah in uu ka hadli doono arrimaha xuquuqul insaanka, iyo waxa dhici doona marka ay kulmaan Trump iyo madaxweynaha hadalka adage e ee Filibiin Rodrigo Duterte.